300 oo askar bilayska Puntland ah oo tabarbar uga furmay kuuliyadda tababarka ciidanka ee Carmo. – Radio Daljir
300 oo askar bilayska Puntland ah oo tabarbar uga furmay kuuliyadda tababarka ciidanka ee Carmo.
Agoosto 13, 2011 12:00 b 0
Carmo, Aug 13 – Kuuliyadda ciidanka bilayska ee degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa tababar looga bilaaabay 300 oo askar bilayska ah kuwaasi oo laga kala keenay inta badan gobollada Puntland.
Tababarka bilayska loo furay oo wakhti kooban socon doonta ayaa inta ay ku jiraan askartaani layliga waxaa ay uga faa’idaysan doonaan aqoon-dheeraad ah oo la xiriirta hawlaha bilayska gaar ahaanna dhinacyada sharciga iyo amni-dhawrista.
Munaasabad lagu daah-furayey tababarkaan oo ka dhacday xarunta kuuliyadda bilayska ee degmada Carmo ayaa waxaa ka qayb-galay mas’uuliyiin kala duwan oo iskugu jirta, heer xukuumadeeda iyo mid gobol iyo degmo.
Madasha faah-furka tababarkaasi waxaa ku sugnaa wasiirrada amniga, arrimaha gudaha iyo maaliyadda, waxaana sidoo kale xafaladda goob-joog ka ahaa taliyayaal bilays, xubno ka socday maamulka gobolka Bari iyo kuwa degmada Carmo.
Mas’uuliyiinta ka qayb-galay furitaanka tababarkaasi oo badankoodu hadallo ka jeediyey halkaasi ayaa ku dheeraaday dardaaran la xiriiro hawl-gudashadooda dambe ee ciidankaasi, una soo jeediyey in ay bulshada ugu adeegeen si daacadnimo iyo xilkasnimo ku dheehan tahay.
Madaxweynaha Iran oo sheegay in Masiibada Somaliya ay sharaf-dhac ku tahay Caalamka.
?Sida Al-shabaab ayaan ula dhaqmaynaa cid kasta oo doonaysa in ay malayshiyo ka hawlgaliso Muqdisho? M/weyne Shariif.